Waa maxay sababta uu u daxalaysto kubbadda birta ah ee birta ah iyo maxay tahay sababta?
Maxay kubadaha biraha birta ahi u daxalaystaan? Markii dhibco miridhku bunni ay ka soo muuqdeen dusha kubbadda birta ah ee birta ah, dadku waxay la yaabeen: “Birta birta ah ma daxalaysato. Haddii miridhku birta ah, ma aha bir bir ah. Waxaa laga yaabaa inay jirto dhibaato xagga birta ah. ” Dhab ahaantii, tani waa ...
Codsiga kubbadda saxda ah ee ugu yar warshadaha quruxda
Warshadaha caafimaadka iyo quruxda, kubadaha saxda ah ee yaryar ayaa loo adeegsadaa badeecooyin kala duwan. Qeexitaanka kubbadda saxda ah ee yar -yar waa kubbad dhexroorkeedu ka yar yahay 1/8 inch (3.175mm), waxaana lagu heli karaa qalab kala duwan oo kala duwan. Kuwa soo socda ayaa tilmaamaya dhowr adeegsi oo caadi ah oo m ...
Sababta keenta buuqa
1. Awoodda xiisaha leh ee ay keento isbeddelka tirada walxaha raran ee raranka ah Marka culayska shucaaca lagu dhejiyo xayndaab gaar ah, tirada walxaha rogaya ee xambaarsan culayska ayaa xoogaa is -beddeli doona inta lagu jiro hawlgalka, taas oo keenta leexashada jihada rarka. 2. Waxyeelada qayb ahaan b ...
Kala soocida kubbadaha birta kaarboon
Kubadaha birta kaarboon, sida magacu tilmaamayo, waa kubbadaha birta ah oo laga farsameeyo alaabta ceeriin ee kaarboon. Kubadaha birta kaarboon waxaa lagu kala saaraa kubadaha birta kaarboonta hoose (0.04%~ 0.25%), kubadaha birta kaarboon dhexdhexaadka ah (0.25 ~ 0.6%) iyo kubbadaha birta kaarboon -sare (0.6%~ 1.35%) marka loo eego kaarboonkooda. C ...
Liaocheng wuxuu dhisi doonaa "Magaalada Ganacsiga Ganacsiga ee Shiinaha" iyo "Magaalada Warshadaha ee Shiinaha"
Sidaan wada ognahay, waxaa ku yaal Liaocheng sumado badan oo sita, laakiin waxaa jira magacyo caan ah oo gobolka caan ku ah. Sababtaas awgeed, inta lagu gudajiray labada kalfadhi ee Liaocheng sanadka 2021, ururka warshadaha iyo ganacsiga ee Liaocheng wuxuu gudbiyay “Soo jeedinta Dardargelinta Dhismaha Laamaha Gobolka ...
Falanqaynta Saamaynta Dhaawacan
Hubi dhagaxa duudduuban ee waxyeellada leh ka dib kala -bax. Marka la eego xaaladda boogta waxyeelloobay, waxaa lagu xukumi karaa inay jirto cillad iyo sababta dhaawaca. 1.Biradu waxay ka soo baxdaa dusha sare ee waddada orodka Waxyaalaha la soo rogayo ee sita iyo sagxadda jidadka giraanta gudaha iyo dibaddaba ...
Falanqaynta Fashilka Dhalinta
Xirmooyinka waa qaybaha aasaasiga ah ee mashiinnada saxda ah. Sida horumarka degdegga ah ee horumarka sayniska iyo farsamada, macaamiishu waxay leeyihiin shuruudo ka sarreeya oo ka sarreeya tayada alaabta dhalista. Waxaa muhiim u ah soo-saaraha inuu bixiyo alaab tayo sare leh oo la jaanqaada heerka ...
Hantida duudduubka tareenka Bearings-4
Saamiyada duudduubka tareenka waxay tixraacaan sahayda loo adeegsado tareenada iyo baabuurta. Rakibaadda mootooyinka waxaa ka mid ah saa'idka sanduuqa dariiq dhexaadka ah, dhejiska mootada jajabka, dhejiska nidaamka gudbinta, sahayda cutubka korontada iyo tilmaamaha nidaamka qaboojinta, iwm.
Hantida duudduubka tareenka Bearings-3
Saamiyada duudduubka tareenka Bearings-2
Hantida duudduubka tareenka Bearings-1
Qorshaha la hagaajiyay ee geedi socodka madaxa qabow ee kubadaha birta ah
Kubadaha birta ah, gaar ahaan kubadaha birta ee aadka u sarreeya, iyadoo ay ugu wacan tahay shuruudaha gaarka ah ee deegaanka isticmaalka kubbadaha birta, kubadaha birta waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo hagaajiyo farsamaynta farsamaynta si ay si joogto ah ula kulmaan heerarka iyo heerarka tayada looga baahan yahay alaabtooda dhammaatay. Generall ...
Kubadaha Copper -ka Yar, Madax Ball Check naxaas, H62 Kubadda Naxaasta, Kubadda naxaasta ee H65, Kubadda naxaasta, Kubbadda Naxaasta ee Adag,